Ukubuyiselwa kobugcisa obubalulekileyo kule website apho uncedo lwakho lufunekayo * UPDATE 24 Oktobha *: UMartin Vrijland
Ukubuyiselwa kobugcisa obubalulekileyo kule website apho uncedo lwakho lufunekayo * UPDATE 24 Oktobha *
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	24 Oktobha 2018	• 1 Comment
Umyalezo woqobo 19 Oktobha * Ngenxa yokuba le website isebenze iminyaka emininzi kwaye inani leendwendwe kwixesha eliphakamileyo liphezulu kakhulu, kubalulekile ukuba lewebhu isebenze kwi-configure server enkulu. Abafundi abaninzi baye bakhononda ngokukhawuleza ngelo xesha i-website ihamba. Isizathu sale nto sele senziwe emva kwaye sibonakala sitholakala kwikhowudi ye-software endala apho umxholo we-website isebenza ngayo. Uncedo lwakho luyimfuneko ngoku.
Ngokwemigaqo yobugcisa sithetha nge-PHP 5.4 eyinto ekhulile yekhowudi yewebhu. Oku kubangelwa ukuba kube neengxabano nezinye iiplagi zeekhompyutha ezisebenzayo kwi-PHP 7.0 entsha. Umakhi walo mxholo kufuneka ngoko enze utshintsho olumiselweyo ukuze i-website isebenze ngokufanelekileyo kwakhona. Oku kubiza imali kwaye ukuba inkxaso yakho ngoko ke ikhonkrithi kwaye iyadingeka ngokukhawuleza.
Iprojekti yeplajethi ejongene nenkqubo yobulungu ithetele idibana neengxaki kwixesha elidlulileyo, ngenxa yoko abantu abaninzi abazama ukuba ngamalungu abakwazi ukukwazi, kuba le nkqubo inamathele. Ngenxa yoko, abanye ababhaliso baye baphelelwa ngokuzenzekelayo. Kwale nxalenye yoluhlu olwenziwa ngokwezifiso, apho umthengisi waseDatshi wayenomusa ngokwaneleyo ukuba angayifaki invoyisi (inkosi yam ngenxa yale nto). Ukuba konke kuhamba kakuhle, oku ngoku kusebenza ngokufanelekileyo.
Njengoko abanye abafundi bebanokukwazi, kodwa abanye abayifuni, ndiye ndatshatyalaliswa kwi-Intanethi yiyo yonkcenkceshela ye-intanethi kunye nokunyundela kunye nokwenqatshelwa komthetho ukukhetha iingxelo zam malunga nale nto. I-Google nayo ayiphenduli kwiimfuno zokususa ezi zixhumanisi kwiinjini zokukhangela kunye ne-Facebook ikhuthaze ngokukhawuleza amaphepha enobungqina. Ngakolunye uhlangothi, i-Facebook ayisoloko ibonisa imibhalo yam kumawaka amaninzi wabalandeli. Kwakhona ufumana phantse i-imeyile evela kwi-Google apho bathetha ukuba iintengiso azibonakalwanga ngamanqaku athile kuba ndiza kuphulaphula imigaqo-nkqubo yabo, ngaphandle kokucacisa ukuba yintoni na ngokuphulwa komgaqo-nkqubo.
Ngoko nqakraza intsimbi eluhlaza ukuze ufumane umyalezo oshukumisayo kwi-mobile yakho okanye kwi-PC ngokuzimela kwi-Facebook okanye kwi-Google, ngokukhawuleza ukuba ndithumele inqaku elitsha.
Iimfundiso ezichasene noMartin Vrijland ezifumaneka kwi-Intanethi, apho ndiyicwecwe, ngokucacileyo zivela kumqeshwa karhulumente, othe wafumana utshintsho ngokwesondo, wamenza ngoku nguye kwaye uye wangena utshintsho lobunikazi. Ndiye ndapapasha ikhadi lomsebenzi lomntu esikhathini esidlulileyo ukucacisa ukuba ukuhlaselwa kubonakala kulungiswa nguRhulumente kuphela. Kungenxa yoko akukho nto iyenzekayo ngesibhengezo endiyichitha imihla epheleleyo ye-2 kwisikhululo samapolisa.
Kukho konke, eli phulo le-smear lenze ukuba akunakwenzeka ukuba ndivelise ingeniso ngokuqhelekileyo. Oku kwenza ukuba ndixhomekeke ngokupheleleyo kwinkxaso yakho ukuqhubeka. Ngoku ukuba i-website idinga ukulungiswa kobugcisa ngendlela yokwenza ngokwezifiso kwaye ngoku ukuba ndibunzima ukugcina intloko yam phezu kwamanzi ngokusebenza, ndingathanda ukunxusa kwakhona ukuba ube ilungu kunye / okanye undixhase ngomnikelo owodwa. Unokuba ilungu apha kunye nomnikelo wesikhathi esisodwa ongayenza kwiwebhusayithi ye-crowdfunding ukuze yonke into icace.
Ndiyabulela kwangaphambili inkxaso yakho!
* PHAMBILI 24 Oktobha *
NgoMvulo odlulileyo 22 Oktobha mhlawumbi awukwazi ukufikelela kwiwebhusayithi iiyure eziliqela. Oku kungenxa yokuba umakhi we-WordPress yangoku (jonga unyawo kwizantsi kwesi siza) uthathe ukulungelelanisa iwebhusayithi yam kwinguqulo ye-PHP7.0. Ngenxa yoko bacela ukufikelela kwipaneli yokulawula kwiseva (cpanel) kunye namalungelo okulawula kule webhusayithi.
Ndiyabulela ngeminikelo endingayihlawula intlawulo ephantsi. Nangona kunjalo, emva kokuba benze utshintsho oluthile oluchanekileyo, kwavela ukuba bekunjalo bephelile zonke iifowuni zeli bhsayithi kwaye i-website yavela ukuba ayifumaneke kwiiyure ezimbalwa. Ngeli xesha ndaxelelwa ukuba umsebenzi wenziwe kwaye i-website iya kusebenza ngoku ngokufanelekileyo. Ngoko ke kufuneka ndiphendulele ngokutshintsha onke amaphasiwedi kunye nokulungisa iziphene ezintle. Oku kuye kwandibiza ixesha elininzi kunye namandla.
Umakhi womxholo wathi bekuyimfuneko ukukhubaza zonke iiplagi, kodwa kwafuneka ndichaze ukuba inkqubo yesenzo eqhelekileyo kuthetha ukuba ulingisa ukucwangciswa komncedisi kunye nesakhiwo sewebhu kwi-system yangaphandle. Awuhambi kwiwebhusayithi enezigidi zeendwendwe ezisebenza kuyo yonke imihla ngelixa injini isebenza. Ngaphezu koko, ndade ndifumene umyalezo wokuba umsebenzi usuphelile.
Kwimeko ngoku ndimele ndikhangele enye i-ejensi ye-software engakwazi ukuqinisekisa ukuba indawo yam iya kusebenza kwakhona okanye ukuba ndifake umxholo ohlukile. Olu hlobo lokugqibela luya kuhlawula ixesha elifanelekileyo, amandla kunye nemali, kuba ukulungiswa kwesimo esiyimfuneko kuye kwenziwa kwiphepha lam style CSS kwaye ezinye iplagi-ins zakhiwe kule ndawo. Ngoko ndiyathemba ngomonde kunye nenkxaso yakho.
Emva kweengxoxo eziyimfuneko, ndakwazi ukukholisa umthengisi womxholo okwangoku ukuba abuyisele imali yokuhlawula. Ngenxa yolu lulu ndimele ndisongele ukupapasha inqaku malunga nendlela yabo yokusebenza echaza igama labo. Akunakuze kube mnandi ukuba usebenzise ingcinezelo ngendlela yokushicilelwa kwangoko, kodwa kuluhlaza ukuba ukwazi ukulahla uhlahlo lwabiwo-mali oluqinileyo, ngenxa yeminikelo embalwa, ngaphandle kokuhamba phambili.
UMartin Vrijland uyeka OKUBALULEKILEYO
Uneminyaka emininzi yeprogram ingaba yatshintshi indlela yakho
Uphando lubonisa ukuba i-NOS kunye namapolisa anokwenza ubungqina bobuxoki kunye nendlela i-alibi ingabhengezwa ngayo
Kutheni i-Elon Musk's skynet, i-nanotech kunye nezitofu ziya kuqonda ukuphakama
I-Nieuwsuur ne-Trouw bafumana u-scoop ukufaka ubungqina bokuthi 'abayiyo intshumayelo yoluntu'
tags: eziziimbalasane, UMartin Vrijland, nokugcinwa, update, website
25 Oktobha 2018 kwi-20: 10
Ngamana ndingayizisa le nto, kwintetho yam eninzi enomdla ngokuqinisekileyo.
« Yiyiphi intyhilelo e-Erdogan eya kuza kusasa kwi-Washington Post intatheli uJamal Khashoggi
Ukutshatyalaliswa kwezibhedlele ezizimeleyo kukuphambili »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.327.987
iifom op I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
guppy op Eyona ndlela isebenzayo yokulwa i-coronavirus ivela eTshayina (ividiyo)
Mindsupply op Ukuwa kwe-cabal 'engenantsingiselo kwaye ngoobani' Q Anon 'Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?